AMY-REBEL WILSON IS NOW FIT AND SHE LOOKS AMAZING – OOTDMYANMAR
AMY-REBEL WILSON IS NOW FIT AND SHE LOOKS AMAZING
No Comments on AMY-REBEL WILSON IS NOW FIT AND SHE LOOKS AMAZING
သွယ်လျတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ အံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင် လှပနေတဲ့ Amy- Rebel Wilson
Fat Amy? Nope! Rebel Wilson opts to be called Fit Amy instead. The 40-year-old Australian actress surprised everyone with her inspiring transformation—and not only does she look freaking gorgeous, she is inspiring us to opt for healthier life choices too!
Fat Amy? မဟုတ်တော့ပါဘူး။ အခုဆိုရင်တော့ Rebel Wilson ကို Fit Amy လို့ ပြောင်းခေါ်ရပါတော့မယ်။ အသက် ၄၀ ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဩစတြေးလျရုပ်ရှင်မင်းသမီးက သူမရဲ့ အံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ပြောင်းလဲမှုနဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကို အံ့အားသင့်အောင်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ သူမက အချိုးကျလှပသွားရုံတင်မကဘဲ အားလုံးကိုလည်း ကိုယ့်ဘဝအတွက် ပိုမိုကျန်းမာစေတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကို ပြုလုပ်နိုင်ဖို့ စံနမူနာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
Amy declared earlier this year that 2020 will be her “year of health,”she “said earlier this January: “I put on the athleisure and went out forawalk, deliberately hydrating on the couch right now and trying to avoid the sugar and junk food which is going to be hard after the holidays I’ve just had but I’m going to do it!”
အေမီ က ၂၀၂၀ ခုနှစ်အစမှာ ဒီနှစ်ဟာ ကျန်းမာခြင်းရဲ့နှစ်ပဲလို့ကြွေးကြော်ခဲ့ပါတယ်။ “ကျွန်မ လေ့ကျင့်ခန်းဝတ်စုံဝတ်ပြီး လမ်းလျှောက်ထွက်တယ်။ ရေဓာတ်ပြည့်ဝအောင်နေတယ်။ အချိုနဲ့ အသင့်စား အစားအသောက်တွေ ရှောင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ အဲ့ဒါကပိတ်ရက်တွေပြီးသွားရင်ပိုခက်ခဲလာမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မလုပ်စရာရှိတာတော့လုပ်ရမှာပဲ” လို့ အေမီက ဇန်နီဝါရီလ အစောပိုင်းမှာ ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။
Tags amyrebel, amyrebelwilson, fitness, ootdmyanmar
←9WAYS TO STYLE A WHITE TOP THAT WOULD INSPIRE YOU TO DRESS UP → 10 DESIGNER BAGS SPOTTED IN “EMILY IN PARIS”